Wholesale Magnetic mbeva padhi-grey Mugadziri uye Mutengesi | Sheerfond
Pa desktop yako yakatsvinda, yakanaka mbeva padhi, panguva imwechete iyo inobata peni uye nhare mbozha, pane chero mashiripiti kunzwa? Ehe, chikamu chayo chekuchengetedza uye mbeva padhi chikamu chinogona kupatsanurwa pamadiro, uye inogona zvakare kushandiswa Rongedza bepa rako nemabhiri. Wakanganwa kukuudza iro rinonyanya kukosha basa, inhare mbozha isina waya, chero bedzi iwe ukaisa foni pairi inogona kubhadhariswa chero nguva, saka rega nditaure chinhu chitsva ichi zvakadzama: 1. Igonzo reganda. pad, ichi chigadzirwa ...
Pa desktop yako yakatsvinda, yakanaka mbeva padhi, panguva imwechete iyo inobata peni uye nhare mbozha, pane chero mashiripiti kunzwa? Ehe, chikamu chayo chekuchengetedza uye mbeva padhi chikamu chinogona kupatsanurwa pamadiro, uye inogona zvakare kushandiswa Rongedza bepa rako nemabhiri. Wakanganwa kukuudza iro rinonyanya kukosha basa, iri mbozha isina waya charger, chero bedzi iwe ukaisa foni pairi inogona kubhadhariswa chero nguva, saka rega nditaure chinhu chitsva ichi zvakadzama:
1.Iye yeganda mbeva padhi, ichi chigadzirwa chinoshandisa zvakatipoteredza zvigadzirwa, uye kunyanya kupfeka-nemishonga PU zvinhu, zvinonzwa zvakanaka, uye mbeva inogona kutsvedza zvakasununguka pamusoro.
2.Ichaji isina waya, inokurumidza kuchaja, 15W / 10W / 7.5W / 5W, zvese zvinogona kushandiswa, kana iwe uchinge uchishanda, isa foni pakombuta, inotanga kuchaja foni yako, uye inogona zvakare kuchaja iwe WTS isina waya bluetooth headset kuchaja.
3. Iyo yekuchengetedza desktop, zvinyoreso, USB flash dhiraivha, makadhi pini, uye erasers zvese zvinogona kuiswa mukati kugadzira yako desktop yakachena.
4. Iyo faira kurongedza, iwe unogona kugadzirisa manotsi, mabhiri, uye pepa.
5. Chikamu chayo chekuchengetera uye mbeva padhi chikamu chinogona kubviswa pamadiro, zvikamu zviviri izvi zvinosanganiswa nemagineti.
6. Iyo inobata nharembozha, kana iwe uchiona vhidhiyo, unogona kusunungura ruoko rwako,
Icho zvakare chigadzirwa chepamutemo chinodzivirira michero yebasa redu.
Ichi chigadzirwa chakanaka chakagadzirwa nevakagadziri vedu zvakanyatsonaka, uye zvakare inogadziriswa ruoko nevashandi vedu vekambani. Icho chigadzirwa chemaoko, chakadai chigadzirwa, haudi here kutora sampuro kuti uwane icho, kana chikakushamisa, usakanganwe Ikurudzira kushamwari dzako.
Maitiro Ekushandisa Zvekukurudzira Zviitiko, Kudzidziswa uye Kuvaka Chikwata, Kugamuchira Zvipo, Kudzokera Kuchikoro / Kupedza Kudzidza, Nyowani Bhizinesi Kupa, Tsika dzeTesteshow, "Ndatenda" Zvipo, Zvimwe Zvekuita.
Kudhinda Kwe logo: CuCustom
Pashure: A4 bhegi
Zvadaro: Ruva goridhe